One Mmupnews – News and media website
Where to?News Art
ရည်းစားအဖြစ် လုံးဝမတွဲသင့်တဲ့ ယောက်ျားညံ့ ( ၁၀ ) မျိုး
By mmm790551 on April 18, 2019 ရည်းစားအဖြစ် လုံးဝမတွဲသင့်တဲ့ ယောက်ျားညံ့ ( ၁၀ ) မျိုး2019-04-18T12:39:02+00:00 under အချစ်နဲ့ဒဿနများ
1) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်ပါတယ် လို့ ပြောပြီး နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျား 3) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို တာဝန် ယူချင်စိတ် မရှိသော ယောင်္ကျား 2) သူပျင်းမှ ဖုန်းဆက် သူစိတ်ပျော်နေတဲ့ အချိန်ဆို အဖတ်မလုပ် ရှိတယ် လို့တောင် မထင်တဲ့ ယောင်္ကျား 4) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာကို မငဲ့ကွက်ဘဲ ယုတ်ညံ့စွာ ပြောဆိုတတ်သော ယောင်္ကျား 5) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ပျော်တော်ဆက်...
သားသမီးများကို ငရဲပေးတဲ့ မိဘဆိုတာတကယ်ရှိပါသလား
By mmm790551 on April 17, 2019 သားသမီးများကို ငရဲပေးတဲ့ မိဘဆိုတာတကယ်ရှိပါသလား2019-04-17T21:46:50+00:00 under ဗဟုသုတ
သားသမီးများကို ငရဲပေးတဲ့မိဘဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ် (၁) `အပြစ်တင်လွန်းတဲ့မိဘ´ ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်တင်နေတတ်တာ တနည်းဆိုရရင် လောဘကြီးမိကြတာပါ အသုံးမကျဘူးဆိုတဲ့ ဘောင်ထဲသွတ်သွင်းတာ သားသမီးက တကယ်အသုံးမကျတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ဒါပေမဲ့ အသုံးမကျတာကိုပဲ ဖောက်မြင်နေတတ်တာ ဒါကိုကြားရဖန်များလာတဲ့အခါ ဒေါသကမိဘကိုပြန်ခံပြောတတ်ဖို့ စတင်လာတယ် ________________________________________ (၂) `ဘက်လိုက်တာ´ သားသမီးချင်းတူတူ ငါ့သမီး/သားလေး ဘက်လိုက်ဆက်ဆံတတ်တာ ဘက်လိုက်တတ်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ သားသမီးတွေဟာ မစည်းလုံးကြတာများတယ် မိဘကသွေးခွဲထားလို့ပါ `နင်ကညံ့တယ် နင်ကတော်တယ်´ ဆိုပြီးကွာလတီခွဲလိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ဘယ်တော့မှဈေးနှုန်းညှိမရကြတော့ဘူး ဘက်လိုက်မှုက မလေးစားမှုကို အစပျိုးပါတယ် အချင်းချင်းမနာလိုစိတ်ကနေ...
အင်္ဂါသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
By mmm790551 on April 17, 2019 အင်္ဂါသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း2019-04-17T21:15:40+00:00 under ဗေဒင်ယတြာ
ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း အလုပ်နေရာ၊အိမ်နေရာ၊အတွေးအခေါ်အယူအဆ၊ဘ၀ခံယူချက်များ အပြောင်းအလဲဖြစ်အံ့။ ဆန့်ကျင့်ဘက်လိင်များထံမှ အကူအညီကောင်းများရလတ္တံ့။ အလုပ်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ အတိုက်အခံ အခက်အခဲများ ကြုံရတတ်။စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်ရအံ့။ အဖက်ဖက်တွင် အလွန်အမင်းလည်းကောင်းနိုင်သလို၊အလွန်အမင်းလည်းညံ့သွားလတ္တံ့။ လူရောစိတ်ပါ တည်ငြိမ်စွာဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာရည်ရွယ်ချက်များကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှင် အောင်မြင်လတ္တံ့။ အတိုက်အခံ အခက်အခဲများကြားမှ အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်လတ္တံ့။ အပေါင်းအသင်းမှားတတ်။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောဆိုလုပ်ကိုင် ဆုံးဖြတ်တာတွေသတိပြုပါ။...
သင့်ကို ဆွဲစားဖို့ သက်သက်သာလာတွဲနေ့တဲ့ ဘဲတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅)ချက် …
By mmm790551 on April 17, 2019 သင့်ကို ဆွဲစားဖို့ သက်သက်သာလာတွဲနေ့တဲ့ ဘဲတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅)ချက် …2019-04-17T17:44:18+00:00 under အချစ်နဲ့ဒဿနများ
ခုခေတ်မှာ တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေကို တဏှာစိတ်သက်သက်နဲ့သာ တွဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုယောက်ျားလေးတွေဟာ တကယ်ကို ယုတ်ညံ့ပြီး အောက်တန်းကျသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ပတ်သက်မ်ိနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး နောက်လှည့်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သူဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံ။ သင့်ကို တဏှာစိတ်သက်သက်ကြောင့် တွဲနေတဲ့သူဟာ သင့်ကို ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှ တဏှာစိတ်နဲ့ဘဲ ဆက်သွယ်မှာပါ။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေကျရင် မအားဘူးတို့၊ တစ်ခုခုအမြဲအကြောင်းပြပြီး သင့်ကို သိပ်ဂရုစိုက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်နဲ့ အတူတူ အိပ်ချင်တဲ့ အချိန်ကျရင်တော့ လေသံချိုတွေနဲ့ အချိုးတစ်မျိုးပြောင်းသွားတတ်တဲ့ သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။...
မြန်မာနိုင်ငံမှဆန်များကို စားသုံးရန်မသင့်သောကြောင့် အိုက်ဗရီကို့စ်က ဖျက်ဆီးပစ်
By mmm790551 on April 17, 2019 မြန်မာနိုင်ငံမှဆန်များကို စားသုံးရန်မသင့်သောကြောင့် အိုက်ဗရီကို့စ်က ဖျက်ဆီးပစ်2019-04-17T17:14:54+00:00 under နိုင်ငံတကာ
– မြန်မာနိုင်ငံက လာတယ်ဆိုတဲ့ ဆန်တန်ချိန်ပေါင်းများစွာကို လူတွေ စားသုံးဖို့ မသင့်တာကြောင့် အိုက်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံက ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆန်တန်ချိန်ပေါင်း ၁၈၀၀၀ လောက်ကို အိုက်ဗရီကို့စ်က မြေမြှုပ်ပစ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆန်တွေဟာ အနောက်အာဖရိက နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဂါနာ၊ ဂီနီနဲ့ တိုဂိုနိုင်ငံတို့က အရည်အသွေးမကောင်းတာကြောင့် လက်မခံဘဲ နောက်ဆုံးမှာ အိုက်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် အရည်အသွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာမှာ လူတွေစားသုံးဖို့ မသင့်ဘူးဆိုတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဆန်ဟာ အာဖရိကတိုက်က နိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ အခြေခံစားသောက်ကုန်ဖြစ်ပေမယ့် ဒေသတွင်း လယ်သမားတွေဟာ...
By mmm790551 on April 17, 2019 တစ်သက်လုံး မခွဲပဲလက်တွဲသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေေးတွကိုသုံးလိုက်ပါနော်…2019-04-17T15:08:08+00:00 under အချစ်နဲ့ဒဿနများ
တစ်သက်လုံးကော်နဲ့ကပ်ထားသလို မခွဲနိုင်အောင်ချစ်​ပြီး လက်တွဲချင်ကြရင် ဒီနည်းလေးသုံးလိုက်ပါ Relationship တစ်ခုမှာတော့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်ပေးဖို့နဲ့ ယုံကြည်ပေးဖို့ပါပဲ။ အဲ့လို နှစ်ယောက်သားနားလည်မူနဲ့ ယုံကြည်မူအပြည့်ရှိနေရင် တစ်သက်လုံးကော်နဲ့ကပ်ထားသလို မကွဲတော့ပါဘူးနော်… ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ မခွဲတမ်းအတူရှိနေချင်ရင်တော့ စိတ်ကိုဖွင့်ထားပါ ၊ အမှတ်ရစရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို တစ်သက်လုံးအမှတ်ရနေအောင် ဖန်တီးပေးပါ။ ဒီနည်းတွေကတော့ ကော်နဲ့ကပ်ထားသလို မခွဲတမ်းရှိနေမယ့် နည်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်… (၁) Facebook Password မတောင်းပါနဲ့ … ဒီဟာမတိုင်ခင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြပါ။ တစ်ယောက်မယုံကြည်ရမယ့်ကိစ္စ တစ်ယောက်က မလုပ်ပါနဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်...
By mmm790551 on April 17, 2019 ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက်၁၃၈၁-ခုနှစ်၊တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း2019-04-17T14:32:40+00:00 under ဗေဒင်ယတြာ
ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများဖြစ်လတ္တံ့။ ကံ အလွန်အမင်းကောင်းနိုင်သလို ၊ ကံ အလွန်အမင်းလည်း ဆိုးလတ္တံ့။ ငြိမ်ငြိမ်နေလျှင် အလွန်အမင်းညံ့လတ္တံ့။ လှုပ်ရှားလျှင် ကံအလွန်အမင်းကောင်းလတ္တံ့။ အိပ်ယာပြောင်းအိပ်ခြင်း၊ခရီးထွက်ခြင်း စသည့် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေထိုင်ဆောင်ရွက်ပါက ကံကောင်းလတ္တံ့။ စိတ်ကူးအကြံအစည် ရည်ရွယ်ချက်များကို စွန့်စွန့်စားစား ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှင် အောင်မြင်လတ္တံ့။ အောက်လက်ငယ်သား ရွှေ ရတနာအတွက် စိတ်ပူရအံ့။ကျန်းမာရေးချူခြာခြင်း၊ဆေးရုံဆေးခန်းများနှင့်ပက်သက်ရခြင်း၊ဘာမှန်းမသိ ရောဂါရှာမရပဲ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊အစားမှားဆေးမှားဖြစ်ခြင်း၊စကားပြောငြင်းခုန်ရခြင်း၊ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်ခြင်း၊စကားပြောကျွံခြင်း လွန်ခြင်း ၊ စက်ပစ္စည်း ၊ စာရွက်စာတမ်း ၊စပ်တူရှယ်ယာကိစ္စများနှင့်ပက်သက်ပြီး စိတ်ညစ်ရတတ်ခြင်း တို့ကြုံရအံ့။ ငွေရေးကြေးရေး – ရစရာပေးစရာငွေများ ထစ်ငေါ့ကြန့်ကြာ လွဲချော်တတ်။...
ကလေးများ အတွက် ကျမ်းမာရေး ယတြာများ နှင့် အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးများအတွက်လည်း ကျမ်းမာရေး ယတြာများ
By mmm790551 on April 17, 2019 ကလေးများ အတွက် ကျမ်းမာရေး ယတြာများ နှင့် အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးများအတွက်လည်း ကျမ်းမာရေး ယတြာများ2019-04-17T11:33:25+00:00 under ကျမ်းမာရေး
မိဘများ ကလေးများ နေမကောင်းလျင် စိတ်မချမ်းသာ စိတ်ပူနေတတ်ပါသည်။ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါသည်။ တစ်ဖက်က ဆေးကုပြီး တစ်ဖက်ကလည်း ဆေးစူးအောင် ကလေးတွေအတွက် ကျန်းမာရေး ယတြာများ ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါတယ်… ယတြာကို ၅ ရက် သို့မဟုတ် ၉ ရက် ပြုလုပ်ပေးလို့ ရပါသည်။ တနင်္ဂနွေ သား သမီးများ ………………………. နေမကောင်းဖြစ်နေလျင် ကလေးရဲ့ အိပ်ယာအောက်တွင် အုန်းရွက် ၉ ရွက် သရက်ရွက် ၉ ရွက် ယူပြီး အုန်းရွက်...
အချစ်ကြောင့်ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုတွေကင်းဝေးဖို့ ဒီလိုလူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့
By mmm790551 on April 17, 2019 အချစ်ကြောင့်ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုတွေကင်းဝေးဖို့ ဒီလိုလူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့2019-04-17T11:07:46+00:00 under အချစ်နဲ့ဒဿနများ
မချစ်ပါနဲ့ ကိုယ့်ထက် သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပိုပီး ဦးစားပေးတတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ ကိုယ့်ထက် ဂိမ်းကိုပိုချစ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ ကိုယ့်ကိုအကြာကြီးပစ်ထားပီး သူလိုအပ်ချိန်မှချစ်ပြတတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ ကိုယ်တျောက်လုံးရှိနေတာတောင် ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေတဲ့ချစ်သူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ ကိုယ့်ကို လိမ်တဲ့လူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ အတ္တကြီးတဲ့ချစ်သူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ လူတကာကို ချစ်ယေးသဲယေး လိုက်ခေါ်နေတဲ့ချစ်သူမျိုး မချစ်ပါနဲ့ အမြဲတမ်း မူးရူးနေတဲ့ချစ်သူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ သူကျလုပ်ချင်ရာလုပ်ပီးကိုယ့်ကိုကျ ချုပ်ချယ်လွန်းတဲ့ချစ်သူမျိုးကို 💚မချစ်ပါနဲ့ ကတိမတည်တဲ့လူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ ကိုယ့်စကားအလေးမထားတဲ့လူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ ကိုယ့်ကိုတစ်နေ့တစ်ခါတောင်phမခေါ်တဲ့လူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့ တစ်ဘက်သတ်ဆန်လွန်းတဲ့သူမျိုးကို မချစ်ပါနဲ့မချစ်ပါနဲ့ တကယ်မချစ်ဘဲ ချစ်ဟန်မဆောင်ပါနဲ့...
By mmm790551 on April 17, 2019 မိန်းမချောတွေ J ၀င်ရလောက်အောင် လှလွန်းတဲ့ လေဒီဘွိုင်းများ2019-04-17T10:01:17+00:00 under Uncategorized
သင်ဟာ ထိုအလှပဂေးတွေကို သူတို့ရဲ့ အလှမယ်ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများကြောင့်လည်းကောင်း အောင်မြင်သော မော်ဒယ်လ်များအဖြစ်လည်းကောင်း၊ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများမှတဆင့်လည်းကောင်း သိန်ိုင်ပါတယ်။ သူတို့တတွေဟာ လိင်အဂါင်္ပြောင်းလဲထားသူတွေဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရေပန်းစားနေကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ် ၁၀။ Chalisa Rose Yuemchai Chalisa Rose Yuemchai ကတော့ အကျိုးအမြတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၇သန်းရရှိခဲ့သော Lost in Thailand တရုတ်ဟာသကားတွင် အရံသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ပြီးနောက် ကျော်ကြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Rose ဟာ မန်ဒရင်း တရုတ်ဘာသာစကားကို ကောင်းကောင်း ပြောဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့် ပရိသတ်တွေ အံ့သြခဲ့ရပါတယ်။...
Copyright © 2019 One Mmupnews Go back to top ↑